Abenzi be-graphite Grease, abahlinzeki - China Graphite Grease Factory
Ukuthambisa i-Black Graphite Grease 1kg Iron Tin
I-Lithium Base Grease ene-Molybdenum disulfide (3%) ingcindezi eyedlulele & i-anti-wear grease, eyenziwe nge-lithium soap thickener kanye ne-oyela esezingeni eliphakeme le-mineral base. Iqukethe izithasiselo ezikhethiwe ne-molybdenum disulfide (i-MoS2 noma i-'moly '). Inezingcindezi ezivelele nezakhiwo zokulwa nokugqoka kanye nokuqina kwemishini. Kutholakala njengamabanga we-NLGI 1, 2 no-3.
I-Petroking Moly Graphite Gcoba i-400g Cartridge
Ukuthambisa iMolykote Gcoba Ibhakede Elingu-15kg